China medal ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe | Kingtai
Nrite ndị a zuru oke maka mkpụrụedemede ederede "ebipụ" ma ọ bụ atụmatụ nwere akụkụ. Enwere ike iji ya na nkwalite ụlọ ọrụ, egwuregwu ma jiri ya dị ka onyinye ncheta maka ndị enyi, nke gosipụtara uru dị mma nke njirimara oyiyi.
Nhọrọ nkwalite ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ịgbakwunye enamel dị nro, akwụkwọ mmado, mbipụta dijitalụ, eserese na epoxy.
Zinc alloy medals na-enye ịtụnanya imewe mgbanwe ruru ka injection ịkpụzi usoro, mgbe ihe onwunwe ya onwe ya bụ nke ukwuu inogide na-enye ndị a Ọla a àgwà imecha. Dị ka ọfụma enamel ọkọlọtọ, ndị ọzọ nwere zinc alloy ndị ọzọ nwere ike ịgụnye agba anọ nke enamel anọ ma nwee ike kpụzie ya n'ụdị ọ bụla.
Anyị na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ iji mee ka ihe nrite ahụ dị mma ma chọọ ha mma. Maka ebumnuche a, anyị na-edobe ha ma ọ bụ na-eme ka ha dị okenye.
Oge mmepụta: 10-15 ụbọchị azụmahịa mgbe akwadoro nka.
ADFR EN EGO MERE AD EN
Ihe nro enamel medal na-anọchite anya nrite enamel akụ na ụba anyị. A na-arụpụta ha site na ígwè stampụ ma ọ bụ ígwè nke nwere ihe mkpuchi enamel dị nro ma tinye mkpuchi resin epoxy, nke na-echekwa nrite site na ncha ma na-enye ezigbo mmecha.
Customdị omenala gị nwere ike ịgụnye agba anọ ma nwee ike zọọ ya n'ụdị ọ bụla site na nhọrọ nke ọla edo, ọlaọcha, ọla kọpa ma ọ bụ oji ojii. Opekempe iji ibu bụ 50 PC.
Ihe nrịba ama akara ndị a jupụtara na enamel vitreous siri ike, na-enye ha ogologo ndụ na-enweghị atụ. N'adịghị ka nro enamel medal, ọ dịghị ihe mkpuchi epoxy chọrọ, ya mere, a na-agbanye enamel ahụ n'elu igwe ahụ.
Customdị omenala gị nwere ike ịgụnye agba anọ ma nwee ike zọọ ya n'ụdị ọ bụla site na nhọrọ nke ọla edo, ọlaọcha, ọla kọpa ma ọ bụ oji ojii. Opekempe iji ibu bụ naanị 25 PC.
ZINC KWES MR M MEDALS
Zinc alloy medals na-enye ịtụnanya imewe mgbanwe ruru ka injection ịkpụzi usoro, mgbe ihe onwunwe ya onwe ya bụ nke ukwuu inogide na-enye ndị a Ọla a àgwà imecha.
Nnukwu pasent nke enamel medals bụ akụkụ abụọ, agbanyeghị mgbe imewe chọrọ ọrụ akụkụ atọ ma ọ bụ ọtụtụ ejiri okpukpu abụọ rụọ ọrụ, usoro a abata na nke ya.
Dị ka ọfụma enamel ọkọlọtọ, ndị ọzọ nwere zinc alloy ndị ọzọ nwere ike ịgụnye agba anọ nke enamel anọ ma nwee ike kpụzie ya n'ụdị ọ bụla. Opekempe iji ibu bụ 50 PC.
Nke gara aga: Mgbịrịgba ekeresimesi na ihe ịchọ mma
Osote: Mkpụrụ ego